646s Askariga casriga ah Vs Dagaalkii Labaad ee Dagaalkii II Nazi - Kumaa Ku guuleysan lahaa? images and subtitles
Naasiyiinta- wax dunidan ka jira miyaa jira? Hagaag, haa, waana zombies Naasiyiin ah, laakiin nasiib wanaag waxaan la tacaali karnaa wax zombies Master ah maanta. Nope, halkii maanta aan wax ka qaban lahayn nolosha, neefsashada kaladuwan, qaybteenna ugu dambeysay Kumaa ku guuleysan doona? Askariga casriga ah ama Dagaalkii Labaad ee Naasiga? Taariikhdu waa 1941, oo dagaalkii Yurub wuxuu si dabaalasho ah ugu socdaa Adolf Hitler. Faransiiska waa la jabiyey, Ingiriiska waxaa lagu haystay boqortooyadeeda yar ee jasiiradda, iyo weerarka ka dhanka ah Soviets waa hal guul cajiib ah midba midka kale. Xaqiiqdii waa xilligii gu'ga ee Hitler - in kasta oo ay dabayaaqadii dayrta ahayd - iyo in blitzkrieg Naxdin leh taliyihii Naasiga wuxuu baarayaa qarsoodiga shaybaarka Naasiyiinta ee dhisaya UFO-injineernimo dib loo abuuray, injineernimada hidde-buluug-indhood leh-midab leh oo waji leh madax-gacmeedka orodka, iyo dabcan, wakhti Mashiin ka afduuba Einstein kuna qasbay inuu Jarmalka bam uga sameeyo Nuclear-ka. Kaga shakisan sheegashadiisa saynisyahano in ay dhiseen mashiin waqti shaqeynaya, ayuu Hitler weydiiyay mid ka mid ah ilaalayaashiisa si ay u siiyaan tijaabin. "Hey, Hans," ayuu Hitler yiri, "Maxaad u boodin, u dhiib mustaqbal sharaf leh kan Saddexaad Dib u soo noolow, oo halkan ku soo noqo oo ii sheeg dhammaan waxa ku saabsan sida cajiibka ah ee Nazi Jarmal u yaal sanadka 2020? ” Ma aha mid ka niyad jabsan Fuhrerkiisa, Hans the Nazi wuxuu ku dhaqaaqayaa mashiinka waqtiga Jarmalka, iyo isagoo riixaya badhanka, wuxuu ku baaba'aa hawada khafiifka ah! Haatan waa 2020, iyo Hans the Nazi wuxuu dib uga soo bilaabay qulqulatadii dhexe ee militariga Rammstein saldhigga, saldhigga ugu weyn Mareykanka ee dibedda iyo guluubka NATO ee Yurub. Isagoo toos ugu dhacay askar Mareykan ah, wuxuu Hans ogaadey in mustaqbalku si xun u baaba'ay khalad, oo hadda wuxuu dhadhaminayaa ganacsigiisa dhamaadka xorriyadda sida aan u nuuxnuuxsanayno Nazi ka soo horjeedka askari Mareykan ah oo casri ah isla markaana garanaya cidda guuleysata. Waxaan u kala goyn doonaa gabal gabal ah tababarka iyo qalabka askari walba, oo ugu dambeyntii garashada cidda ugu sarreysa. Markay noqoto dhanka tababarka, waxyaabaha u dhigma ee udhaxeeya askariga Mareykanka ah ee casriga ah iyo Naaska askar waa badan yihiin. Askarigii Nazi-ga wuxuu geli lahaa tababar aasaasi ah oo leh aqoon horumarsan oo ku saabsan hubka iyo xitaa qaar ka mid ah xeeladaha carruurnimada ayaa uga mahadcelinaya baahinta dhalinyarada Hitler ee Nazi Jarmalka. Wiilasha ayaa si weyn loogu dhiirigeliyay inay ku biiraan dhalinyarada Hitler ilaa iyo 14, barnaamij wadaninimo Taasi waxay ahayd wax la mid ah sida wiilka loo yaqaan 'The Sco Scouts' ee dalka Mareykanka- kaliya iyadoo si weyn culays weyn la saaray on kibirka qaran, nacaybka Yuhuudda, iyo barashada dagaalka. Waxaa maamula halyeeyadii dagaalkii koowaad ee adduunka, xanaaqkii ka dhashay guuldaradii Jarmalka waxaa lagu dhalliyay dhalinyaro jiilal, iyo Hitler doqon ma ahayn- wuxuu sanado badan ku qaatay diyaarinta wiilal badan oo reer Jarmal ah inay noqdaan askar. Ameerika casriga ma laha wax barnaamij ah oo kale, inta badan askarta loo qoro militarigana waxay ka yimaadaan a caadi, asalka rayidka. Markii la galay tababarka milatariga, tababarka labadaba waxay ahaayeen kuwo aad u lamid ah. Askariga nazi ayaa ku adkaysan doona 16 toddobaad oo tababar ah oo bilow ah ka hor inta aan loo dirin qaybtooda halkaas waxay heli lahaayeen tababar dheeri ah. Askarigeenna casriga ah ee Ameerika si kastaba ha ahaatee wuxuu mari doonaa 8 toddobaad oo tababar ah si uu ugu soo jeediyo laga soo bilaabo qof rayid ah ilaa askar, ka dibna 16 usbuuc oo dheeri ah oo dugsiga dhallaanka ah ilaa bar isaga sida loo xakameeyo goob kasta oo dagaal ah. Askarta Nazi waxay lahaayeen waxbarasho aad u wanaagsan, tababar dhammaystiran, iyo faa iidooyin badan oo halyeeyayaashii dagaalkii adduunka ee 1aad in laga barto. Si ka duwan ummadaha kale, askarta Nazi waxay sidoo kale heleen tababar aqoon u leh hub kale waxaa lagu dhejin karaa cutubkooda, gaar ahaan qoryaha mashiinka. Tabobarka casriga ah ee Mareykanku wuxuu muraayad u leeyahay moodalkan, oo ilman Mareykan ah oo dhalanyaro ah maahee qof yaqaan hub kasta oo hubkiisa uu sito ayaa qaadi kara, laakiin had iyo jeer waa inuu ku mutaystaa dhowr ka mid ah inuu caddeeyo aqoontiisa. Intaas oo dhan, askariga casriga ah ee Mareykanka ayaa khibrad u leh xitaa xitaa pre-WWII Nazi askariga oo ka tagaya tababarka koowaad, halka tababarayaasha Naasigana ay ka heleen faa iidada Dagaalkii Adduunka Waxaan ahay halyeeyo, askarta Mareykanka ee casriga ah waxay leeyihiin faa'iidooyinka tababarayaasha halyeeyada ah ee soo qaatay safarro badan oo ku saabsan khilaafaadka ka jira Afgaanistaan ​​iyo Ciraaq. Hadana askarigii Nazi wuxuu ku raaxaystay faa iidada dishibiliin aad u weyn, iyo a Yaqaanid milatariga millateriga ee ka dhashay sanadihii uu ka soo shaqeeyay Dhalinyaradii Hitler. Marka ay timaado tababarka, waxaan u wici doonnaa xitaa labada dhinacba, laakiin askariga Nazi iyo sanadihii uu caanka ku ahaa Xiliga Hitler wuxuu ka helayaa dhiniciisa Ameerika askar markay tahay taam iyo rabitaan dagaal. Dagaal gacan-ka-qaadis ah, ayaa askarkeenna Mareykan ah uu heli doonaa tiro intaa ka badan, iyo tababar wanaagsan ka badan askarigii Nazi-ga. Askarta Nazi waxay filan karaan inay bartaan qaar ka mid ah farsamooyinka gacanta-ka-qaadista iyo feerka, laakiin waa mid casri ah Askarta Mareykanku waxay muddo tobannaan sano ah barteen farsamooyinka fanka dagaal oo isku dhafan. Barnaamij dagaal oo geesinimo iyo go’aamo leh, horaantii 2000s ciidankii Mareykanka oo idil barnaamijka fanka dagaallada waxay ahayd in dib loogu fiirsado sababta oo ah tababarka oo aan ku jirin xakamaynta dadka aan halista ahayn farsamooyinka. Markay tahay dagaal gacan-ku-qaadis ah, askarkeenna Ameerika ah ayaa dusha saaraya, mahadsanid tobanaan sano oo waayo-aragnimo ah iyo isbeddel ah tababbarka milatariga. Labada ciidanba waxay haysteen ikhtiyaarro ay ku heli karaan aan ka ahayn gacan bir ah oo jilicsan, iyo is jiid jiid ah Ciyaarta, dagaalyahanadeenu si dhaqso leh ayey ugu noqon lahaayeen aaladahaan sare si loo gaaro guul. Askarigeenna Nazi-ga ah wuxuu qaadi lahaa seitengewehr 98 mindi / bayonet. Muujinta mindi ku dhawaad ​​15 inji ah, mindikaan dhimatay ayaa lagu dhejin karaa hore ee qoriga sidii bayonet. Askarta Mareykanku badanaa waxay wataan mindi sidoo kale, laakiin astaamaha ugu badan ayaa ah marin habaabinta Mareykanka qalab, ama e-qalab gaagaaban. Fiilo isku laabma oo leh geesoodyo la yaab leh, qalabka elektaroonigga ah wuxuu u oggolaanayaa askar Mareykan ah inuu si dhakhso leh u helo naftiisa u qodo qodobo dagaal ciid kasta, laakiin sidoo kale waxay u adeegtaa sidii gacan gacan gacan taag ah oo runtii ba'ay hub. Hal wareeg oo ka timid aaladda elektaroonigga ah ayaa ku filan in la kala jajabiyo qalfoofka cadowga oo furan, ama xitaa la keeno koofiyad madax-ruxis ah iyada oo loo marayo koofiyad ilaalin ah. Marka la eego faa'iidooyinka muuqda ee hub garaacis gaagaaban iyo hubka wareegaya oo kale ah, waxaan nahay Kaliya waa inaan kaliya siino askarigayaga Mareykanka guusha halkaan maxaa yeelay wuxuu ka duwan yahay Nazi-ga mindi, qalabka Mareykanka ee loo yaqaan 'e-tool' ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in si dhakhso ah loogu qodo booska dagaalka, bixinta waa tamar badan marka lagu jiro xaalad dagaal. Meel u dhow, askarigii Nazi wuxuu adeegsaday sumcada Walther P38, oo bastoolad caan ku ahaa sidii ay ciidammada isbahaysiga u raadin jireen sidii dagaal xusuus ah. Si la yaab leh, P38 wali waa laga isticmaalaa adduunka oo dhan, oo ay ku jirto Afgaanistaan ​​halkaasoo xoogaga kacdoonku waxay si caadi ah ugu isticmaali jireen askarta NATO. Dabaalista rasaasta 9mm, P38 waxay leedahay ugu badnaan 50 mitir, wayna sax ahayd si ay u leeyihiin firfircoon oo firfircoon oo 25-25 mitir ah. Iyada oo xawaare xawaare ah oo ah 320 mitir sekenkiiba, P38 waxay leedahay awood joojinta cajiibka ah cabbirkeeda yar. Iyada oo ay jirto kaliya joornaal wareega 8 ah, P38 ma u oggolaan lahayn askariga Nazi inuu dabka ku hayso bartilmaameedka muddo aad u dheer, bedelkeeda ku tiirsanaan saxnaanta halkii mugga dab. Askarigeenna Ameerika ayaa ka tirsanaya Nazi P38 oo leh Beretta M9. Waxa ugu jecel yahay inta badan cayaaraha Degganeyaasha, M9 wuxuu shaqeynayay illaa 1980-yadii. Hub aad u la isku halleyn karo, M9 ayaa xirxira 9mm wareeg ah oo leh joornaal wareega 15 ah, oo siinaya askarkeenna casriga ah ayaa leh awood weyn oo ay ku ridaan ka hor intaysan u baahnayn in dib loo soo iibsado. Hubku wuxuu leeyahay xawaare xawaare ah oo ah 381 mitir ilbiriqsi kasta, taasoo siineysa inuu si weyn u galo in ka badan Nazi Nazi ee loo yaqaan 'P P' ', isla markaana leh ugu badnaan toogashada hubka in ka badan laba jeer hubka Nazi, at 100 mitir iyo 50 mitir xajmiga ugu waxtarka badan. Iyada oo laban laab ah tirada ugu badan uguna wax ku oolka badan, iyo ku dhawaad ​​labajibaar awoodda, Guusha halkan si cad waxay u tahay askariga casriga ah ee Mareykan ah iyo aaminka M9. Hawlgal dhexdhexaad ah iyo mid dhaadheer, askarigeena Nazi-ga ah wuxuu qaadaa Karabiner 98k, heerka qoriga ciidanka Jarmalka dagaalkii labaad ee II. Qoryaha dagaalka oo aad loo isku halleyn karo, K98k wuxuu arkay ficil ku saabsan goobaha dagaalka ee ka socda Afrika ilaa qaybta bari ee Ruushka, waxayna ku shaqeysaa sidoo kale dhoobada iyo roobka sida barafka iyo barafka. Hubku wuxuu leeyahay aaladda 7.92 mm wareega wareega, kaas oo keenaya burburka haddii waxay ku garaacday bartilmaameed iyadoo u mahadcelineysa xajmigeeda iyo xajmiga xawaaraha ee 760 mitir sekenkiiba. Qoriga qoriga wuxuu haystay firfircooni firfircoon oo 500 mitir leh meelaha birta lagu arko, in kasta oo ay kari karto wali gaarsiiya dabka saxda ah 1,000 mitir iyadoo leh aragga telescopic. Baaxadda ugu badan ee 4,700 mitir ayaa la micno ah in xitaa masaafo aad u fog laga yaabo inuu qoriga haysto khaldanaa, laakiin wali wuu dhiman karaa haddii toogasho ku dhacdo dhul bartilmaameed laga dhigto. Nasiib darrose qoriga ayaa lagu xaddiday awood 5 wareeg ah, taas oo siinaysa awood la'aan si loo xakameeyo bartilmaameedka. Taabadalkeed, dhallaanka Jarmalka waxay ku tiirsanaayeen saxnaanta, iyo qoryaha darandooriga u dhaca, si looga takhaluso ciidamada cadawga. Askarigeenna Mareykan ah wuxuu keenaa isku hallayntiisa M4 Carbine dagaalkaan. In kasta oo ay jiraan warar xan ah oo liddi ku ah, M4 ayaa si cajiib leh ku fuliya deegaanno kala duwan, iyo qof kasta oo waligiis ku khasbanaaday inuu mid ka isticmaalo garoonka dhexdiisa - halkii uu wax kaga akhrin lahaa internetka Maqaallada- way ogyihiin in qoryuhu wax dhib ah kala kulmin toogashada xitaa marka lagu ridayo wasakh iyo musuq. Meesha qoriga ay ka soo baxdo xoogaa gaaban ayaa ku jirta awood joojinta, maaddaama ay ku fadhiisato wareeg 5.56 ee soddon joornaalada wareega ah oo in muddo ah loogu yeerayay tabar darro ku shaqeeyayaasha loogu talagalay in aan la keenin awood joojin ku filan oo la dilo. Si kastaba ha noqotee, xawaaraha xawaaraha uu ku fadhiyo waa 910 mitir ilbiriqsi marka lagu daro bir-geliyaha birta waxay siisaa shaqo wanaagsan ka hortagga hubka jirka. Qiyaasta ugu badan ee ugu waxtarka badan ee 500 mitir bartilmaameedka dhibic, iyo 600 mitir oo ballac ah bartilmaameedka siiya inay si aad ah u gaadhaan. Intaa waxaa sii dheer, M4 waxay bixisaa awoodaha xulashada dabka, taas oo u oggolaaneysa adeegsigeedu inuu hal dab qabadsiisto wareegyada loogu talagalay dabka saxda ah ee dhaadheer, ama 3-wareega oo loogu talagalay dagaalka ka socda meelaha ugu dhow. Markay noqoto kala duwanaansho, labada qoryoodba waxaa lagu xidhaa labadoodaba leh xaddiga ugu badan ee waxtar leh bartilmaameedka- ama bartilmaamed bini-aadam ah oo gaaraya 500 mitir iyadoo la adeegsanayo kaliya aragtida birta. Askarteenna kama dagaallami doonaan wax intaas ka sii badan marka loo eego midba midka kale, waa sidaas wixii intaas ka dambeeya waa wax aan micno lahayn oo ay adkaan lahayd in la arko bartilmaameedkaaga si kastaba ha noqotee. K98k wuxuu ka sarreeyaa M-4 wareegiisa weyn, kaasoo dhawaanahan burburin lahaa heerar dhexdhexaad ah. Si kastaba ha noqotee, iyadoo leh xawaare aad u hooseeya oo aad uga hooseeya M-4, jilicsanaanta wareegaas weyn si aad ah ayey u yaraaneysaa intaa ka sii dheer ee ay ku qasbeyso- illaa heer koowaad ama laba darbo ayaa si fudud lagu joojin doonaa heerka caadiga ah ee hubka jirka oo ay qaadayaan dhallaanka Mareykanka ah safka ugu badan. Marka la barbardhigo, awoodda weyn ee majaladda iyo xawaaraha degdega ee M-4 ayaa siiya askariga casriga ah ee Mareykanku waa faa iidooyin aan kala go 'lahayn ee dagaalka dabka, iyo sidoo kale awooda u wareeji dab ka kaca wareega 3-wareeg ee dagaalka wareega. Awood u leh inuu dhiibo seddex wareeg oo naxdin leh hal tuujin wuxuu ka dhigan yahay inay ku dhowdahay M4 ayaa garaacaya K98k, laakiin xajmigeeda weyn ee majaladda iyo heerka toogashada M-4 ayaa soo socota kor ugu soo baxa jaranjarada dhexe iyo kuwa dheerba sidoo kale. Haddii askarigii Nazi-ga ahi dhacday inuu waqtigiisa safarka ku safro isagoo leh aragtida telescopic-ga ah, Mareykankeenna dhallaanka ayaa si fiican masaafada u dhow u dhow, maxaa yeelay K98k ayaa bixin kara saxda Dabka ka socda M4 ma rajeyn karin inuu taabto. Ku dhowaad heerar dhexdhexaad ah, guusha ayaan siineynaa askariga casriga ah ee Ameerika. Laakiin heerar aad u dheer, guushu waxay si fudud ugu dhacdaa askarigii Nazi iyo awoodiisa gaadho oo taabo qof ilaa 1000 yaard u jira si sax ah oo qumman. Ugudambeyntii, waqtigeenna safarka ah ee Naasi-ga ah wuxuu leeyahay faa iidada jimicsi jireed iyo mid maskaxeed mahadsanid ilaa sanadihii uu ku qaatay barnaamijyada qaran ee tababarida dhalinyarada ee Hitler, faa iidadana leh dab aad u daran oo baaxad leh ayaa mahad leh saxnimada iyo baaxadda qoriga K98k. Si kastaba ha noqotee aag kasta oo kale askariga casriga ah ee Ameerikaanka ah ayaa ku sarreeya, Thanks to evolution barnaamijyada tababarka ee 80-kii sano ee la soo dhaafay si weynna loo casriyeeyay qalab casri ah. Laga yaabee inaad diidan tahay inkasta oo- labada aad u maleynaysaa inuu run ahaan ku guuleysan doono hal-hal-hal la dagaallama geerida? Nala soo socodsii faallooyinka, iyo hadda oo aad ugu dambayntii tahay, maxaad u dhawri weyday xaflad adoo gujinaya fiidiyowga halkan, ama laga yaabee inaad halkaan ka daawan lahayd halkii ?! Degdeg oo hal mid riix, si ka duwan dagaalyahannadeena maanta - ma lumin kartid!
Askariga casriga ah Vs Dagaalkii Labaad ee Dagaalkii II Nazi - Kumaa Ku guuleysan lahaa?
< start="0.329" dur="3.271"> Naasiyiinta- wax dunidan ka jira miyaa jira? >
< start="3.6" dur="5.32"> Hagaag, haa, waana zombies Naasiyiin ah, laakiin nasiib wanaag waxaan la tacaali karnaa wax zombies Master ah >
< start="8.92" dur="1"> maanta. >
< start="9.92" dur="3.36"> Nope, halkii maanta aan wax ka qaban lahayn nolosha, neefsashada kaladuwan, qaybteenna ugu dambeysay >
< start="13.28" dur="1"> Kumaa ku guuleysan doona? >
< start="14.28" dur="2.91"> Askariga casriga ah ama Dagaalkii Labaad ee Naasiga? >
< start="17.19" dur="4.36"> Taariikhdu waa 1941, oo dagaalkii Yurub wuxuu si dabaalasho ah ugu socdaa Adolf Hitler. >
< start="21.55" dur="4.27"> Faransiiska waa la jabiyey, Ingiriiska waxaa lagu haystay boqortooyadeeda yar ee jasiiradda, iyo weerarka >
< start="25.82" dur="3.31"> ka dhanka ah Soviets waa hal guul cajiib ah midba midka kale. >
< start="29.13" dur="4.24"> Xaqiiqdii waa xilligii gu'ga ee Hitler - in kasta oo ay dabayaaqadii dayrta ahayd - iyo in blitzkrieg >
< start="33.37" dur="5.17"> Naxdin leh taliyihii Naasiga wuxuu baarayaa qarsoodiga shaybaarka Naasiyiinta ee dhisaya UFO-injineernimo dib loo abuuray, >
< start="38.54" dur="4.47"> injineernimada hidde-buluug-indhood leh-midab leh oo waji leh madax-gacmeedka orodka, iyo dabcan, wakhti >
< start="43.01" dur="4.25"> Mashiin ka afduuba Einstein kuna qasbay inuu Jarmalka bam uga sameeyo Nuclear-ka. >
< start="47.26" dur="4.37"> Kaga shakisan sheegashadiisa saynisyahano in ay dhiseen mashiin waqti shaqeynaya, ayuu Hitler weydiiyay >
< start="51.63" dur="1.94"> mid ka mid ah ilaalayaashiisa si ay u siiyaan tijaabin. >
< start="53.57" dur="3.64"> "Hey, Hans," ayuu Hitler yiri, "Maxaad u boodin, u dhiib mustaqbal sharaf leh kan Saddexaad >
< start="57.21" dur="3.8"> Dib u soo noolow, oo halkan ku soo noqo oo ii sheeg dhammaan waxa ku saabsan sida cajiibka ah ee Nazi Jarmal u yaal >
< start="61.01" dur="1.65"> sanadka 2020? ” >
< start="62.66" dur="4.3"> Ma aha mid ka niyad jabsan Fuhrerkiisa, Hans the Nazi wuxuu ku dhaqaaqayaa mashiinka waqtiga Jarmalka, iyo >
< start="66.96" dur="2.74"> isagoo riixaya badhanka, wuxuu ku baaba'aa hawada khafiifka ah! >
< start="69.7" dur="5.43"> Haatan waa 2020, iyo Hans the Nazi wuxuu dib uga soo bilaabay qulqulatadii dhexe ee militariga Rammstein >
< start="75.13" dur="5.03"> saldhigga, saldhigga ugu weyn Mareykanka ee dibedda iyo guluubka NATO ee Yurub. >
< start="80.16" dur="4.68"> Isagoo toos ugu dhacay askar Mareykan ah, wuxuu Hans ogaadey in mustaqbalku si xun u baaba'ay >
< start="84.84" dur="5.17"> khalad, oo hadda wuxuu dhadhaminayaa ganacsigiisa dhamaadka xorriyadda sida aan u nuuxnuuxsanayno Nazi ka soo horjeedka >
< start="90.01" dur="3.1"> askari Mareykan ah oo casri ah isla markaana garanaya cidda guuleysata. >
< start="93.11" dur="4.14"> Waxaan u kala goyn doonaa gabal gabal ah tababarka iyo qalabka askari walba, >
< start="97.25" dur="2.62"> oo ugu dambeyntii garashada cidda ugu sarreysa. >
< start="99.87" dur="4.26"> Markay noqoto dhanka tababarka, waxyaabaha u dhigma ee udhaxeeya askariga Mareykanka ah ee casriga ah iyo Naaska >
< start="104.13" dur="1.01"> askar waa badan yihiin. >
< start="105.14" dur="4.269"> Askarigii Nazi-ga wuxuu geli lahaa tababar aasaasi ah oo leh aqoon horumarsan oo ku saabsan hubka >
< start="109.409" dur="5.121"> iyo xitaa qaar ka mid ah xeeladaha carruurnimada ayaa uga mahadcelinaya baahinta dhalinyarada Hitler ee Nazi Jarmalka. >
< start="114.53" dur="5.06"> Wiilasha ayaa si weyn loogu dhiirigeliyay inay ku biiraan dhalinyarada Hitler ilaa iyo 14, barnaamij wadaninimo >
< start="119.59" dur="4.19"> Taasi waxay ahayd wax la mid ah sida wiilka loo yaqaan 'The Sco Scouts' ee dalka Mareykanka- kaliya iyadoo si weyn culays weyn la saaray >
< start="123.78" dur="3.19"> on kibirka qaran, nacaybka Yuhuudda, iyo barashada dagaalka. >
< start="126.97" dur="4.48"> Waxaa maamula halyeeyadii dagaalkii koowaad ee adduunka, xanaaqkii ka dhashay guuldaradii Jarmalka waxaa lagu dhalliyay dhalinyaro >
< start="131.45" dur="5.03"> jiilal, iyo Hitler doqon ma ahayn- wuxuu sanado badan ku qaatay diyaarinta wiilal badan oo reer Jarmal ah >
< start="136.48" dur="1.66"> inay noqdaan askar. >
< start="138.14" dur="4.55"> Ameerika casriga ma laha wax barnaamij ah oo kale, inta badan askarta loo qoro militarigana waxay ka yimaadaan a >
< start="142.69" dur="1.57"> caadi, asalka rayidka. >
< start="144.26" dur="3.9"> Markii la galay tababarka milatariga, tababarka labadaba waxay ahaayeen kuwo aad u lamid ah. >
< start="148.16" dur="4.56"> Askariga nazi ayaa ku adkaysan doona 16 toddobaad oo tababar ah oo bilow ah ka hor inta aan loo dirin qaybtooda halkaas >
< start="152.72" dur="1.73"> waxay heli lahaayeen tababar dheeri ah. >
< start="154.45" dur="3.81"> Askarigeenna casriga ah ee Ameerika si kastaba ha ahaatee wuxuu mari doonaa 8 toddobaad oo tababar ah si uu ugu soo jeediyo >
< start="158.26" dur="4.74"> laga soo bilaabo qof rayid ah ilaa askar, ka dibna 16 usbuuc oo dheeri ah oo dugsiga dhallaanka ah ilaa >
< start="163" dur="2.53"> bar isaga sida loo xakameeyo goob kasta oo dagaal ah. >
< start="165.53" dur="5.039"> Askarta Nazi waxay lahaayeen waxbarasho aad u wanaagsan, tababar dhammaystiran, iyo faa iidooyin badan oo halyeeyayaashii dagaalkii adduunka ee 1aad >
< start="170.569" dur="1.181"> in laga barto. >
< start="171.75" dur="4.48"> Si ka duwan ummadaha kale, askarta Nazi waxay sidoo kale heleen tababar aqoon u leh hub kale >
< start="176.23" dur="3.25"> waxaa lagu dhejin karaa cutubkooda, gaar ahaan qoryaha mashiinka. >
< start="179.48" dur="4.79"> Tabobarka casriga ah ee Mareykanku wuxuu muraayad u leeyahay moodalkan, oo ilman Mareykan ah oo dhalanyaro ah maahee qof yaqaan >
< start="184.27" dur="4.21"> hub kasta oo hubkiisa uu sito ayaa qaadi kara, laakiin had iyo jeer waa inuu ku mutaystaa dhowr ka mid ah inuu >
< start="188.48" dur="1.08"> caddeeyo aqoontiisa. >
< start="189.56" dur="5.25"> Intaas oo dhan, askariga casriga ah ee Mareykanka ayaa khibrad u leh xitaa xitaa pre-WWII Nazi >
< start="194.81" dur="4.31"> askariga oo ka tagaya tababarka koowaad, halka tababarayaasha Naasigana ay ka heleen faa iidada Dagaalkii Adduunka >
< start="199.12" dur="4.03"> Waxaan ahay halyeeyo, askarta Mareykanka ee casriga ah waxay leeyihiin faa'iidooyinka tababarayaasha halyeeyada ah ee soo qaatay >
< start="203.15" dur="3.02"> safarro badan oo ku saabsan khilaafaadka ka jira Afgaanistaan ​​iyo Ciraaq. >
< start="206.17" dur="4.211"> Hadana askarigii Nazi wuxuu ku raaxaystay faa iidada dishibiliin aad u weyn, iyo a >
< start="210.381" dur="4.619"> Yaqaanid milatariga millateriga ee ka dhashay sanadihii uu ka soo shaqeeyay Dhalinyaradii Hitler. >
< start="215" dur="4.04"> Marka ay timaado tababarka, waxaan u wici doonnaa xitaa labada dhinacba, laakiin askariga Nazi >
< start="219.04" dur="4.41"> iyo sanadihii uu caanka ku ahaa Xiliga Hitler wuxuu ka helayaa dhiniciisa Ameerika >
< start="223.45" dur="2.71"> askar markay tahay taam iyo rabitaan dagaal. >
< start="226.16" dur="4.56"> Dagaal gacan-ka-qaadis ah, ayaa askarkeenna Mareykan ah uu heli doonaa tiro intaa ka badan, iyo tababar wanaagsan >
< start="230.72" dur="1.48"> ka badan askarigii Nazi-ga. >
< start="232.2" dur="4.21"> Askarta Nazi waxay filan karaan inay bartaan qaar ka mid ah farsamooyinka gacanta-ka-qaadista iyo feerka, laakiin waa mid casri ah >
< start="236.41" dur="3.94"> Askarta Mareykanku waxay muddo tobannaan sano ah barteen farsamooyinka fanka dagaal oo isku dhafan. >
< start="240.35" dur="5.04"> Barnaamij dagaal oo geesinimo iyo go’aamo leh, horaantii 2000s ciidankii Mareykanka oo idil >
< start="245.39" dur="5.179"> barnaamijka fanka dagaallada waxay ahayd in dib loogu fiirsado sababta oo ah tababarka oo aan ku jirin xakamaynta dadka aan halista ahayn >
< start="250.569" dur="1"> farsamooyinka. >
< start="251.569" dur="3.911"> Markay tahay dagaal gacan-ku-qaadis ah, askarkeenna Ameerika ah ayaa dusha saaraya, mahadsanid >
< start="255.48" dur="3.619"> tobanaan sano oo waayo-aragnimo ah iyo isbeddel ah tababbarka milatariga. >
< start="259.099" dur="4.581"> Labada ciidanba waxay haysteen ikhtiyaarro ay ku heli karaan aan ka ahayn gacan bir ah oo jilicsan, iyo is jiid jiid ah >
< start="263.68" dur="4.419"> Ciyaarta, dagaalyahanadeenu si dhaqso leh ayey ugu noqon lahaayeen aaladahaan sare si loo gaaro guul. >
< start="268.099" dur="4.111"> Askarigeenna Nazi-ga ah wuxuu qaadi lahaa seitengewehr 98 mindi / bayonet. >
< start="272.21" dur="4.01"> Muujinta mindi ku dhawaad ​​15 inji ah, mindikaan dhimatay ayaa lagu dhejin karaa hore ee >
< start="276.22" dur="1.749"> qoriga sidii bayonet. >
< start="277.969" dur="4.44"> Askarta Mareykanku badanaa waxay wataan mindi sidoo kale, laakiin astaamaha ugu badan ayaa ah marin habaabinta Mareykanka >
< start="282.409" dur="1.69"> qalab, ama e-qalab gaagaaban. >
< start="284.099" dur="5.011"> Fiilo isku laabma oo leh geesoodyo la yaab leh, qalabka elektaroonigga ah wuxuu u oggolaanayaa askar Mareykan ah inuu si dhakhso leh u helo >
< start="289.11" dur="5.07"> naftiisa u qodo qodobo dagaal ciid kasta, laakiin sidoo kale waxay u adeegtaa sidii gacan gacan gacan taag ah oo runtii ba'ay >
< start="294.18" dur="1"> hub. >
< start="295.18" dur="3.93"> Hal wareeg oo ka timid aaladda elektaroonigga ah ayaa ku filan in la kala jajabiyo qalfoofka cadowga oo furan, ama xitaa la keeno >
< start="299.11" dur="3.229"> koofiyad madax-ruxis ah iyada oo loo marayo koofiyad ilaalin ah. >
< start="302.339" dur="4.63"> Marka la eego faa'iidooyinka muuqda ee hub garaacis gaagaaban iyo hubka wareegaya oo kale ah, waxaan nahay >
< start="306.969" dur="4.95"> Kaliya waa inaan kaliya siino askarigayaga Mareykanka guusha halkaan maxaa yeelay wuxuu ka duwan yahay Nazi-ga >
< start="311.919" dur="4.15"> mindi, qalabka Mareykanka ee loo yaqaan 'e-tool' ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in si dhakhso ah loogu qodo booska dagaalka, bixinta >
< start="316.069" dur="2.84"> waa tamar badan marka lagu jiro xaalad dagaal. >
< start="318.909" dur="5.4"> Meel u dhow, askarigii Nazi wuxuu adeegsaday sumcada Walther P38, oo bastoolad caan ku ahaa >
< start="324.309" dur="3.461"> sidii ay ciidammada isbahaysiga u raadin jireen sidii dagaal xusuus ah. >
< start="327.77" dur="4.269"> Si la yaab leh, P38 wali waa laga isticmaalaa adduunka oo dhan, oo ay ku jirto Afgaanistaan ​​halkaasoo >
< start="332.039" dur="3.59"> xoogaga kacdoonku waxay si caadi ah ugu isticmaali jireen askarta NATO. >
< start="335.629" dur="4.801"> Dabaalista rasaasta 9mm, P38 waxay leedahay ugu badnaan 50 mitir, wayna sax ahayd >
< start="340.43" dur="3.43"> si ay u leeyihiin firfircoon oo firfircoon oo 25-25 mitir ah. >
< start="343.86" dur="5.33"> Iyada oo xawaare xawaare ah oo ah 320 mitir sekenkiiba, P38 waxay leedahay awood joojinta cajiibka ah >
< start="349.19" dur="1.279"> cabbirkeeda yar. >
< start="350.469" dur="4.521"> Iyada oo ay jirto kaliya joornaal wareega 8 ah, P38 ma u oggolaan lahayn askariga Nazi inuu >
< start="354.99" dur="5.399"> dabka ku hayso bartilmaameedka muddo aad u dheer, bedelkeeda ku tiirsanaan saxnaanta halkii mugga >
< start="360.389" dur="1"> dab. >
< start="361.389" dur="3.691"> Askarigeenna Ameerika ayaa ka tirsanaya Nazi P38 oo leh Beretta M9. >
< start="365.08" dur="5.079"> Waxa ugu jecel yahay inta badan cayaaraha Degganeyaasha, M9 wuxuu shaqeynayay illaa 1980-yadii. >
< start="370.159" dur="5.48"> Hub aad u la isku halleyn karo, M9 ayaa xirxira 9mm wareeg ah oo leh joornaal wareega 15 ah, oo siinaya >
< start="375.639" dur="3.691"> askarkeenna casriga ah ayaa leh awood weyn oo ay ku ridaan ka hor intaysan u baahnayn in dib loo soo iibsado. >
< start="379.33" dur="5.199"> Hubku wuxuu leeyahay xawaare xawaare ah oo ah 381 mitir ilbiriqsi kasta, taasoo siineysa inuu si weyn u galo >
< start="384.529" dur="5.85"> in ka badan Nazi Nazi ee loo yaqaan 'P P' ', isla markaana leh ugu badnaan toogashada hubka in ka badan laba jeer hubka Nazi, at 100 >
< start="390.379" dur="3.051"> mitir iyo 50 mitir xajmiga ugu waxtarka badan. >
< start="393.43" dur="4.34"> Iyada oo laban laab ah tirada ugu badan uguna wax ku oolka badan, iyo ku dhawaad ​​labajibaar awoodda, >
< start="397.77" dur="4.289"> Guusha halkan si cad waxay u tahay askariga casriga ah ee Mareykan ah iyo aaminka M9. >
< start="402.059" dur="5.381"> Hawlgal dhexdhexaad ah iyo mid dhaadheer, askarigeena Nazi-ga ah wuxuu qaadaa Karabiner 98k, heerka >
< start="407.44" dur="2.9"> qoriga ciidanka Jarmalka dagaalkii labaad ee II. >
< start="410.34" dur="5.309"> Qoryaha dagaalka oo aad loo isku halleyn karo, K98k wuxuu arkay ficil ku saabsan goobaha dagaalka ee ka socda Afrika ilaa >
< start="415.649" dur="5.04"> qaybta bari ee Ruushka, waxayna ku shaqeysaa sidoo kale dhoobada iyo roobka sida barafka iyo barafka. >
< start="420.689" dur="5"> Hubku wuxuu leeyahay aaladda 7.92 mm wareega wareega, kaas oo keenaya burburka haddii >
< start="425.689" dur="4.591"> waxay ku garaacday bartilmaameed iyadoo u mahadcelineysa xajmigeeda iyo xajmiga xawaaraha ee 760 mitir sekenkiiba. >
< start="430.28" dur="4.219"> Qoriga qoriga wuxuu haystay firfircooni firfircoon oo 500 mitir leh meelaha birta lagu arko, in kasta oo ay kari karto >
< start="434.499" dur="4.051"> wali gaarsiiya dabka saxda ah 1,000 mitir iyadoo leh aragga telescopic. >
< start="438.55" dur="4.959"> Baaxadda ugu badan ee 4,700 mitir ayaa la micno ah in xitaa masaafo aad u fog laga yaabo inuu qoriga haysto >
< start="443.509" dur="4.53"> khaldanaa, laakiin wali wuu dhiman karaa haddii toogasho ku dhacdo dhul bartilmaameed laga dhigto. >
< start="448.039" dur="4.74"> Nasiib darrose qoriga ayaa lagu xaddiday awood 5 wareeg ah, taas oo siinaysa awood la'aan >
< start="452.779" dur="1.47"> si loo xakameeyo bartilmaameedka. >
< start="454.249" dur="4.72"> Taabadalkeed, dhallaanka Jarmalka waxay ku tiirsanaayeen saxnaanta, iyo qoryaha darandooriga u dhaca, si looga takhaluso >
< start="458.969" dur="1.23"> ciidamada cadawga. >
< start="460.199" dur="3.55"> Askarigeenna Mareykan ah wuxuu keenaa isku hallayntiisa M4 Carbine dagaalkaan. >
< start="463.749" dur="4.88"> In kasta oo ay jiraan warar xan ah oo liddi ku ah, M4 ayaa si cajiib leh ku fuliya deegaanno kala duwan, >
< start="468.629" dur="4.57"> iyo qof kasta oo waligiis ku khasbanaaday inuu mid ka isticmaalo garoonka dhexdiisa - halkii uu wax kaga akhrin lahaa internetka >
< start="473.199" dur="5.25"> Maqaallada- way ogyihiin in qoryuhu wax dhib ah kala kulmin toogashada xitaa marka lagu ridayo wasakh iyo musuq. >
< start="478.449" dur="4.62"> Meesha qoriga ay ka soo baxdo xoogaa gaaban ayaa ku jirta awood joojinta, maaddaama ay ku fadhiisato wareeg 5.56 >
< start="483.069" dur="4.71"> ee soddon joornaalada wareega ah oo in muddo ah loogu yeerayay tabar darro ku shaqeeyayaasha >
< start="487.779" dur="3.36"> loogu talagalay in aan la keenin awood joojin ku filan oo la dilo. >
< start="491.139" dur="5.721"> Si kastaba ha noqotee, xawaaraha xawaaraha uu ku fadhiyo waa 910 mitir ilbiriqsi marka lagu daro bir-geliyaha birta >
< start="496.86" dur="2.759"> waxay siisaa shaqo wanaagsan ka hortagga hubka jirka. >
< start="499.619" dur="5.44"> Qiyaasta ugu badan ee ugu waxtarka badan ee 500 mitir bartilmaameedka dhibic, iyo 600 mitir oo ballac ah >
< start="505.059" dur="2.181"> bartilmaameedka siiya inay si aad ah u gaadhaan. >
< start="507.24" dur="4.509"> Intaa waxaa sii dheer, M4 waxay bixisaa awoodaha xulashada dabka, taas oo u oggolaaneysa adeegsigeedu inuu hal dab qabadsiisto >
< start="511.749" dur="4.931"> wareegyada loogu talagalay dabka saxda ah ee dhaadheer, ama 3-wareega oo loogu talagalay dagaalka ka socda meelaha ugu dhow. >
< start="516.68" dur="4.31"> Markay noqoto kala duwanaansho, labada qoryoodba waxaa lagu xidhaa labadoodaba leh xaddiga ugu badan ee waxtar leh >
< start="520.99" dur="4.96"> bartilmaameedka- ama bartilmaamed bini-aadam ah oo gaaraya 500 mitir iyadoo la adeegsanayo kaliya aragtida birta. >
< start="525.95" dur="3.76"> Askarteenna kama dagaallami doonaan wax intaas ka sii badan marka loo eego midba midka kale, waa sidaas >
< start="529.71" dur="4.17"> wixii intaas ka dambeeya waa wax aan micno lahayn oo ay adkaan lahayd in la arko bartilmaameedkaaga si kastaba ha noqotee. >
< start="533.88" dur="5.01"> K98k wuxuu ka sarreeyaa M-4 wareegiisa weyn, kaasoo dhawaanahan burburin lahaa >
< start="538.89" dur="1.19"> heerar dhexdhexaad ah. >
< start="540.08" dur="4.36"> Si kastaba ha noqotee, iyadoo leh xawaare aad u hooseeya oo aad uga hooseeya M-4, jilicsanaanta wareegaas weyn >
< start="544.44" dur="4.21"> si aad ah ayey u yaraaneysaa intaa ka sii dheer ee ay ku qasbeyso- illaa heer koowaad ama >
< start="548.65" dur="4.68"> laba darbo ayaa si fudud lagu joojin doonaa heerka caadiga ah ee hubka jirka oo ay qaadayaan dhallaanka Mareykanka ah >
< start="553.33" dur="1.2"> safka ugu badan. >
< start="554.53" dur="4.47"> Marka la barbardhigo, awoodda weyn ee majaladda iyo xawaaraha degdega ee M-4 ayaa siiya >
< start="559" dur="4.41"> askariga casriga ah ee Mareykanku waa faa iidooyin aan kala go 'lahayn ee dagaalka dabka, iyo sidoo kale awooda >
< start="563.41" dur="2.98"> u wareeji dab ka kaca wareega 3-wareeg ee dagaalka wareega. >
< start="566.39" dur="4.49"> Awood u leh inuu dhiibo seddex wareeg oo naxdin leh hal tuujin wuxuu ka dhigan yahay inay ku dhowdahay >
< start="570.88" dur="5.33"> M4 ayaa garaacaya K98k, laakiin xajmigeeda weyn ee majaladda iyo heerka toogashada M-4 ayaa soo socota >
< start="576.21" dur="2.98"> kor ugu soo baxa jaranjarada dhexe iyo kuwa dheerba sidoo kale. >
< start="579.19" dur="4.54"> Haddii askarigii Nazi-ga ahi dhacday inuu waqtigiisa safarka ku safro isagoo leh aragtida telescopic-ga ah, Mareykankeenna >
< start="583.73" dur="4.13"> dhallaanka ayaa si fiican masaafada u dhow u dhow, maxaa yeelay K98k ayaa bixin kara saxda >
< start="587.86" dur="2.83"> Dabka ka socda M4 ma rajeyn karin inuu taabto. >
< start="590.69" dur="4.02"> Ku dhowaad heerar dhexdhexaad ah, guusha ayaan siineynaa askariga casriga ah ee Ameerika. >
< start="594.71" dur="4.59"> Laakiin heerar aad u dheer, guushu waxay si fudud ugu dhacdaa askarigii Nazi iyo awoodiisa >
< start="599.3" dur="4.49"> gaadho oo taabo qof ilaa 1000 yaard u jira si sax ah oo qumman. >
< start="603.79" dur="4.55"> Ugudambeyntii, waqtigeenna safarka ah ee Naasi-ga ah wuxuu leeyahay faa iidada jimicsi jireed iyo mid maskaxeed mahadsanid >
< start="608.34" dur="4.57"> ilaa sanadihii uu ku qaatay barnaamijyada qaran ee tababarida dhalinyarada ee Hitler, faa iidadana leh >
< start="612.91" dur="5.12"> dab aad u daran oo baaxad leh ayaa mahad leh saxnimada iyo baaxadda qoriga K98k. >
< start="618.03" dur="4.48"> Si kastaba ha noqotee aag kasta oo kale askariga casriga ah ee Ameerikaanka ah ayaa ku sarreeya, Thanks to evolution >
< start="622.51" dur="4.71"> barnaamijyada tababarka ee 80-kii sano ee la soo dhaafay si weynna loo casriyeeyay qalab casri ah. >
< start="627.22" dur="4.54"> Laga yaabee inaad diidan tahay inkasta oo- labada aad u maleynaysaa inuu run ahaan ku guuleysan doono hal-hal-hal >
< start="631.76" dur="1.19"> la dagaallama geerida? >
< start="632.95" dur="3.55"> Nala soo socodsii faallooyinka, iyo hadda oo aad ugu dambayntii tahay, maxaad u dhawri weyday >
< start="636.5" dur="4.93"> xaflad adoo gujinaya fiidiyowga halkan, ama laga yaabee inaad halkaan ka daawan lahayd >
< start="641.43" dur="1"> halkii ?! >
< start="642.43" dur="3.13"> Degdeg oo hal mid riix, si ka duwan dagaalyahannadeena maanta - ma lumin kartid! >